▷ Sida loo daawado qalalaasaha Dhulka aan dhamaadka lahayn: Dalabka Online ka ah iyo Faahfaahinta - 【Isbarbardhigga】 2022
Sida loo daawado qalalaasaha Dhulka aan dhamaadka lahayn: Dalbo iyo tafaasiisha khadka tooska ah
Muujinaya geesiyaasha ugu waaweyn ee majaajilada DC Comics canon, Arrowverse crossovers hadda waa dhacdooyin waaweyn oo ku jira jadwalka taageeraha TV kasta iyo waxaan halkaan u nimid inaan kuu sheegno sida loo daawado qalalaasaha dhulka aan dhamaadka lahayn sanadkan.
1 Qalalaasaha liiska hubinta ee aan dhamaadka lahayn ee Dhulka
2 Sidee looga daawan karaa Qalalaasaha Dunida aan dhamaadka lahayn ee ka baxsan dalkaaga
3 Daawo Qalalaasaha Dhulka aan dhamaadka lahayn: Qaybta 1 - Supergirl
4 Daawo Qalalaasaha Dhulka aan dhamaadka lahayn: Qaybta 2 - Batwoman
5 Daawo Qalalaasaha Dhulka aan dhamaadka lahayn: Qaybta 3 – Fiiriga
6 Daawo Qalalaasaha Dhulka aan dhamaadka lahayn: Qaybta 4 - Falaadh
7 Daawo Qalalaasaha Dhulka aan dhamaadka lahayn: Qaybta 5 - Halyeeyada Berri
Qalalaasaha liiska hubinta ee aan dhamaadka lahayn ee Dhulka
Qalalaasaha ka jira Dhulka Infinitet ee wareegga lixaad ee falaarta, kadib Elseworlds 2019. Waa a Shan dhacdo gaar ah Supergirl, Batwoman, Flash The, Arrow, iyo DC's Legends of Tomorrow. Dhammaan qaybaha hadda waxay diyaar ku yihiin Maraykanka iyo UK, ama dhawaan ayay ahaan doonaan.
Muujinaya dhowr ka mid ah bandhigyada geesiga ugu wanaagsan, Qalalaasaha Dhulka aan dhamaadka lahayn waxa ka mid ah shan qaybood, kan kowaad ee Supergirl, labaad Batwoman, saddexaad ka Flash The, afraad ka Arrow iyo ugu dambeeya ka DC ee Legends of Berri.
Ma dooneyno inaan wax kuu burburinno, laakiin waa ammaan in la yiraahdo superheroes dhab ahaantii waa ka soo horjeedaan sannadkan, maaddaama Anti-Monitor uu doonayo inuu baabi'iyo dhammaan kuwa kala duwan.
Haddi aad tahay taageere aad u adag ee Comics DC ama aad raadinayso hab fudud oo aad ku qabsan karto bandhig cusub, halkan waa sida loo daawado Dhibaatada Dhulka Infinite onlayn oo aad u gudbiso isdhaafka sida saxda ah, oo ay ku jiraan dhammaan xulashooyinka bandhigga. Gebi ahaanba bilaash ah.
Sidee looga daawan karaa Qalalaasaha Dunida aan dhamaadka lahayn ee ka baxsan dalkaaga
Haddii aad isku dayeyso ka hel waxyaabaha ka socda CW ama TV-ga hadda ee dibadda, waxaa laga yaabaa inaadan awoodin inaad sidaas sameyso sababtoo ah xannibaadaha-joojinta. Laakiin waxa jira xal fudud oo dhamaystiran oo sharci ah. Soo dejinta mid ka mid ah VPN-yada ugu fiican waxay kuu ogolaanaysaa inaad daawato qalalaasaha ka jira Dhulka aan dhamaadka lahayn si aad meel kasta uga joogto.
Qaybtan fudud ee software-ku waxay beddeshaa ciwaanka IP-gaaga si aad u gali karto qaybaha baahida tooska ah ama sida aad guriga ku heli lahayd. ku daawashada CW iyo NOW TV lacag la'aana waa ikhtiyaar macquul ah meel kasta oo aduunka ah.
In kasta oo ay jiraan boqolaal VPN-yada laga soo xusho, wali waa ay jiraan waxaan ku talinaynaa ExpressVPN. Iyo sidoo kale deg-deg ah, fudud oo fudud in la rakibo, sidoo kale waa ku habboon qalabyo badan: Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox, PlayStation, iOS, iyo Android si loo magacaabo dhowr ka mid ah kuwa ugu waaweyn.
Waxaa intaa dheer, ExpressVPN's 30-maalin dammaanad-celin dabacsan ayaa adag in lala doodo. Xitaa ka sii wanaagsan, waxaad ku iibsan kartaa qorshe sanadle ah qiimo dhimis 49% ah iyo 3 bilood oo dheeraad ah oo BILAASH ah - heshiis weyn oo ku saabsan barnaamijyada muhiimka ah.
Marka la rakibo, dooro goobtaada hooyo oo si fudud dhagsii Connect. Kadib waxaad si fudud uga daawan kartaa Qalalaasaha Dhulka Infinitet onlayn oo ka faa'iidayso xulashooyin badan oo daawasho bilaash ah oo hoos lagu muujiyey.
Daawo Qalalaasaha Dhulka aan dhamaadka lahayn: Qaybta 1 - Supergirl
Qalalaasaha Dunida Infinite wuxuu ka bilaabmaa Supergirl Season 5, Episode 9, halka Monitor iyo Harbinger ay ururiyaan geesiyaasha adduunka ugu waa weyn si ay u qaataan Kahortagga Kormeerka.
Daawo Qalalaasaha Dhulka aan dhamaadka lahayn: Qaybta 2 - Batwoman
Dhibaatada Dhulka Infinitet Qaybta 2 waxay ku jirtaa Batwoman Season 1, Episode 9. Laakiin way ku adag tahay, gaar ahaan dadka UK jooga. Dhab ahaan, Batwoman waxay hadda ka bilowday hawada E4 ee UK iyo qaybta 9 waa inaysan hoos u dhicin ka hor May, kaas oo khalkhal galinaya nidaamka hawlgalka, sida uu sheegay Sky. Gudaha Maraykanka, way fududahay, laakiin, wakhtiga qoraalkan, waxa wali diyaar u ahaa daawashada bilaashka ah ee shabakada CW.
Daawo Qalalaasaha Dhulka aan dhamaadka lahayn: Qaybta 3 – Fiiriga
Kadibna waxaad rabtaa inaad aragto qaybta 3 ee Dhibaatada Dhulka Infinite, waxa laga heli karaa Xiliga Flash 6, Qaybta 9. Way fududahay gudaha UK, laakiin waxay joojisay baahinta bilaashka ah ee Maraykanka ee ku saabsan website-ka CW. Tani waxay la macno tahay inaad iibsanayso, ilaa aad ka joogto dalka Maraykanka oo aad ka timi dibadda, xaalkaas Isticmaalka VPN wuxuu kuu ogolaanayaa inaad u safarto meelaha sida UK oo kale ah oo laga yaabo in laga heli karo ikhtiyaarrada kale ee daawashada.
Daawo Qalalaasaha Dhulka aan dhamaadka lahayn: Qaybta 4 - Falaadh
Sii wad u daawashada Dhibaatada Dhulka Infinitet, sida ay u kala horreeyaan, markan Arrow Season 8, Episode 8, taasi dhab ahaantii si bilaash ah ayaa looga daawan karaa Maraykanka iyo Boqortooyada Ingiriiska.
Daawo Qalalaasaha Dhulka aan dhamaadka lahayn: Qaybta 5 - Halyeeyada Berri
Si aad wax u billowdo qaab ahaan, Halyeeyada DC ee Berri Xiliga 5 waxa uu ku bilaabmayaa dhacdadii ugu danbaysay ee Dhibaatada Dhulka aan dhamaadka lahayn, si aad u rabto Halyeeyga Berri xilli 5 dhacdo 1 in ay dhammeeyaan daawashada sanadkan ee Arrowverse crossover sida saxda ah.
Waxa markii ugu horreysay laga baahin doonaa UK Khamiista 2-da Abriil ee Sky One 20pm., ka dib waxa ay ku soo degi doontaa walaalka shabakada ee la awoodi karo, hadda TV. Dalka Mareykanka, waa inaad lacag ku bixisaa.
Wax walba: # 1 ugu fiican VPN
Taraafikada Torrent iyo P2P